“Maro ny olona matin’ny tazomoka ao Betroka” hoy Pst Barinarivo Rajosoa - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Feno kapoaka il y a 7 heures
Kapoaka mesure d’unité dans le commerce au quotidien à réformer? il y a 1 jour
« Samy nantsoin’Andriamanitra tsirairay isika… » il y a 2 jours
Aza avela ho tany lavitra andriana ny Kaominina Ambanivohitr’i Solila il y a 4 jours
Famine et pandémie: l’alarme au sud de Madagascar il y a 5 jours
Tambajotra mafia, manondrana harem-pirenena ! il y a 5 jours
Sur les traces du nouveau PM il y a 6 jours
Fahasalamana ao Betroka
“Maro ny olona matin’ny tazomoka ao Betroka” hoy Pst Barinarivo Rajosoa
Nangonin’i Ny Volana il y a 8 mois
Mbola mitohy hatrany ny fihibohana fanapahan-kevitra noho ny fisian’ny aretina covid 19. Tsy afaka zaraina any amin’ny faritra samihafa ny Gazety Lakroa koa voatery natsahatra ny fanontana azy. Mitohy hatrany ny famoahana ireo lahatsoratra tokony ho navoaka teo amin’izany gazety taratasy izany ary eto amin’ny gazety nomerika isika no mifampitafa sy mizara ny lahatsoratra. Mankasitraka anao manaraka hatrany.
Resaka nifanaovana tamin’i Barinarivo Rajosoa, Mpitandrina FJKM,
mpikambana Comité de Santé du District eto Betroka
Miady amin'ny coronavirus isika ankehitriny
fa mandripaka koa anefa ny aretina hafa
toa ny tazomoka.
Inona no zava-misy iainan'ny mponina ao Betroka sy ny manodidina manoloana izany ?
Miaina vanim-potoana sarotra tokoa izao tontolo izao
nandritra izay volana efatra tamin'ity taona 2020 ity izay.
Niaina ny vokatr'izany koa isika teto Madagasikara.
Anisan'ny aretina saika mandringana olona maro tokoa ity Covid 19 ity.
Fa raha eto Betroka manokana
dia tena maro ny olona matin'ny aretina Tazomoka.
Tsy vao tamin'ity taona ity anefa izany
fa efa an-taonany maro.
Ny zaza amam-behivavy no tena maro matin'ity
ato anatin'ny Distrikan'i Betroka.
Ary ny olona any ambanivohitra no tena maro maty.
Raha ny tarehimarika hita eo anivon'ny Centre de Santé du District izay azonay tamin'ity herinandro ity dia olona iray no matin'ny tazo any amin'ny Kaominina Mahasoa Est, ato anatin'ny Distrika. Ary tsy mitsaha-mitombo ny olona mararin'ny tazo ankehitriny. Ireo Kaominina akaikin'ny renivohitry ny Distrika araka ny tompon’andraikitra ara-pahasalamana no tena be voa. Misy amin'ireo marary koa anefa, rehefa nahazo fitsaboana ara-potoana no sitrana ara-dalàna. Misy tsy fahampiana loatra ihany ny tarehimarika azo avy eny amin'ny CSD satria rehefa mandeha manao « tournée » any ambanivohitra izahay mpitondra fivavahana dia mahita fa maro no matin'ny tazomoka kanefa tsy voaray any amin'ny tompon’andraikitry ny fahasalamana ny tarehimarika momba izany. Amin'ny Kaominina iray ohatra izao dia misy olona manan-janaka 5 mianadahy, ka ny 4 tamin'izy ireo dia samy matin'ny tazomoka avokoa. Rehefa natao koa ny fanadihadiana teo anivon'ny fivarotam-panafody iray teto Betroka dia ny 70%-n'ny varotra ataon'izy ireo amin'izao fotoana izao dia mahakasika ny fanafody amin'ny ady amin'ny tazomoka. 50 isan'andro eo ho eo no manao fitiliana tazomoka ka 4 amin'ireo ihany no tsy tratran’ity aretina ity.
Koa satria tsy dia marina loatra ny tarehimarika izay miakatra any amin'ny tompon’andraiki-pahasalamana eo anivon'ny Distrika dia tsy marina toa izany koa ny tarehimarika miakatra any amin'ny tompon’andraikitra eo anivon'ny Minisiteran'ny Fahasalamam-bahoaka ka mahatonga ity ady amin'ny tazomoka ity ho tsy laharam-pahamehana loatra amin'ny fitondram-panjakana.
Anisan'ny olana lehibe mahatonga ny tahan'ny marary sy matin'ny tazomoka ho ambony koa ny tsy fahalalana eo amin'ny mponina. Io tsy fahalalana io, miampy ny fombafomba mahazatra ny olona aty, tsy manatona toeram-pitsaboana raha tsy efa tena tsy sitran'ny mpanao ody gasy ny aretina. Misy toerana sasany aza moa tsy avelan'ireo mpitsabo amin'ny alalan'ny ody manatona toeram-pitsaboana mihitsy.
Ankoatra ny resaka fahasalamana, inona no heverinao fa olana tsy mampandeha ny fihariana any ambanivohitra ? Ary aiza ho aiza isika amin'ny famahana olana ?
Ny olana tena manahirana tamin'ity taona ity dia ny tsy fahampian'ny orana. Tena tsy nisy firy mihitsy ny rotsak'orana teto amin'ny distrikan'i Betroka. Ny tsy fisian'ny rotsak'orana anefa dia tena misy akony lehibe eo amin'ny famokarana. Ny ankamaroan'ny olona ato amin'ny Distrika anefa dia tena mbola mivelona amin'ny fambolena (vary, katsaka, voanjo, tsaramaso, tongolo, mangahazo, sns…). Be dia be no namboly kanefa tsy nahazo na dia vokatra hohanina akory aza. Ny vokatra mantsy ho an'ny olona aty Betroka dia sady miantoka ny sakafo hohanina no hamidy ho enti-manao ireo adidy samihafa. Be dia be ny tambanivohitra arak'izany, amin'ity taona ity, no sady tsy hanan-kanin-kohanina no tsy ho afaka hanatanteraka ny adidiny. Ny vokatra azo avy amin'ny fisian'ny rotsak'orana anefa no miantoka ny taona manontolo. Ity tsy fisian'ny vokatra ity dia mety hiteraka fiakaran'ny tahan'ny tsy fandriam-pahalemana satria sady tsy nanana asa ireo tanora, no tsy manam-bola, sahirana. Izany fahasahiranana izany dia hitarika amin'ny fitadiavana ny fomba tsotra hahazoan-javatra ka miafara matetika amin'ny tsy fandriam-pahalemana.
Ny famahana olana efa notanterahina aloha hatreto dia ny ezaka fanatonana ny tambanivohitra, indrindra ny mpiompy omby mba hanao ezaka tsy handoro tanety. Anisan'ny antony iray lehibe mahatonga ny tsy fahampian'ny rotsak'orana mantsy izy ity.
Eo ihany koa ny ezaka izay efa notanterahin'ny mpitondra taty an-toerana tamin'ny fambolen-kazo. Ny famerenana ny tontolo ho maitso mantsy dia tena manampy be dia be amin'ny hisian'ny rotsak'orana indray. Ho an'ny Fiangonana manokana dia efa misy fiaraha-miasa amin'ireo fikambanana avy any Antananarivo izay mitondra fanofanana ho an’ireo tanora (asa, fahasalamana).
Ny fotoana ikatonan'ny sisin-tany dia ahafahana mandinika ny famokarana ato anatiny. Inona no tena ilain'ny olona any ambanivohitra mba hampakarana ny famokarany sy hitondra fihatsarana eo amin'ny fari-piainany ?
Raha ny famokarana aty ambanivohitra no resahina, heverina fa ny fanofanana ireo tambanivohitra ireo tekinika moderina amin'ny fambolena sy ny fiompiana dia tena zava-dehibe. Olona tena mora mandray ihany mantsy ny olona aty amin'ny Distrikan'i Betroka. Tany mahavokatra rahateo koa ny tany aty. Ary raha ny marina dia tany tsy mila zezika kanefa dia tena mahavokatra rehefa voakarakara tsara. Izay hatsatoka moa aty dia maniry avokoa rehefa tena mahazo rano tsara.
Anisan'izay heverina fa tena hampandroso be aty Atsimo ny fandefasana ireo tekinisianina vita fianarana samihafa hanampy ireo tantsaha amin'ny famolahana ny tany. Ny fanomezana fitaovana mifanaraka amin'ny vaninandro ankehitriny koa dia tena hita fa hampandroso be. Raha eto amin'ny Distrikan’i Betroka manokana ohatra izao dia traktera iray no miasa ato, ary izy io ary dia tsy maharaka akory ny asa noho ny fahasimbana matetika.
Zava-dehibe izay tena tokony hataon'ny fanjakana laharam-pahamehana ihany koa ny fanamboarana barazy, izay mamatsy rano ireo toerana mamokatra. Ny fambolena aty mantsy dia miandry rotsak'orana avokoa amin'ny toerana maro. Raha mba mahazo rano ireo toerana ireo dia mba mety hahavokatra in-droa isan-taona ny maro ka hampitombo ny vokatra izany, ary rehefa mitombo ny vokatra dia mba miakatra ny fari-piainan'ny olona aty Atsimo.
Nangonin’i Ny Volana
Tafatafan-dRatalata : Feno kapoaka - il y a 7 heures
Réforme en vue : Kapoaka mesure d’unité dans le commerce au quotidien à réformer? - il y a 1 jour
Education et sport : Une formation théorique d’animateurs sportifs a eu lieu. - il y a 26 jours
Fahasalamana : Mbola betsaka no tsy mahalala ny faingosela na ny drepanositozy - il y a 1 moi